Showpad: Votoatin'ny varotra, fanofanana, fifampiraharahana ary fandrefesana ny mpividy | Martech Zone
Showpad: Votoatin'ny varotra, fanofanana, fifampiraharahana ary fandrefesana an'ny mpividy
Talata, May 12, 2020 Alakamisy Oktobra Oktobra 1, 2020 Douglas Karr
Rehefa mamoaka ekipa mpivarotra ny orinasanao, ho hitanao fa lasa ilaina amin'ny alina ny fikatsahana atiny mahomby. Ekipa fampandrosoana ny orinasa mitady taratasy fotsy, fandinihana tranga, antontan-taratasy fonosana, topy maso momba ny vokatra sy serivisy… ary irian'izy ireo ampanjifaina amin'ny indostria, fahamatoran'ny mpanjifa ary ny haben'ny mpanjifa izany.
Inona ny atao hoe Sales Enablement?
Sales Enablement dia dingana stratejika amin'ny fampitaovana ireo orinasam-pivarotana amin'ny fitaovana, atiny ary fampahalalana mety hivarotra amin'ny fomba mahomby. Manome hery ny solo-varotra Sales izy io mba hanome traikefa mahaliana ho an'ireo mpividy maoderina manantena ny fanatontosana azy ho azy, ny automatisation ary ny fanavaozana amin'ny ankapobeny.
Fanamafisana ny varotra lavitra
Miaraka amin'ireo fanidiana COVID-19 farany teo, ny ekipa mpivarotra dia nanary ny fahafahany mifandray manokana amin'ny vinan'asany amin'ny toerana na amin'ny kaonferansa. Ny fivarotana lavitra dia nitombo tamin'ny fahalianana ary ny fahazoana mivarotra lavitra no nanjary fanamby. Raha ny tena izy, mihoatra ny antsasaky ny fikambanana rehetra nanambara fa fanamby ny fivarotana lavitra.
Mampihoron-koditra tanteraka ny virus coronavirus ho an'izao tontolo izao, saingy tsara ho an'ny fampivoarana ny varotra… Angatahina aminao ny mpivarotra anananao hanana faritany bebe kokoa - manaova bebe kokoa amin'ny vitsy. Ny fitaovam-pivarotana fivarotana dia mitarika fahombiazana sy fahombiazana.
Mary Shea, mpandalina Forrester
Aza hadinoina ny mijery Hub an'ny loharanom-pahalalana lavitra an'ny Showpad. Showpad dia nanangana ny Hub mba hanampiana ireo fikambanana izay voatery nifindra tamin'ny modely lavitra iray manontolo. Maimaimpoana tanteraka ary misy andian-dahatsary iray avy Mandresy amin'ny famolavolana, lahatsoratra bilaogy momba ny fivarotana, ny fampiofanana, ny sambo ary ny toro-hevitra avy amin'ny manam-pahaizana Showpad.
Showpad dia manana sehatra fampandehanana varotra feno izay mampiditra ny lafiny rehetra amin'ny dia fivarotana ilaina:
Trano famakiam-boky izay mora tadiavina
Votoatin'ny mpividy izay manintona sy natao manokana
Fampahalalana momba ny varotra amin'ny fanaraha-maso ny atiny sy ny zava-bitan'ny ekipa
Fampidirina mba hampandeha automatique ny fizotry ny varotra sy hanosehana ireo angona ho CRM na modely fifanarahana.
Sehatra fampiroboroboana ny varotra no ahafahan'ny orinasa mampiditra ny fianarana sy ny fampandrosoana ny varotra mitohy, mampitombo ny fahombiazan'ny fizotry ny varotra, mamela ny mpivarotra hanana fifandraisana tsara kokoa amin'ny mpividy, ary mampifanaraka ny ezaky ny varotra sy ny varotra.
Fitantanana atiny Showpad
Ny Showpad dia ahafahan'ny fikambanana manana toerana afovoany ahafahan'ny mpivarotra mahita, manolotra ary mizara ny atiny farany misy marika amin'ny traikefa mahasarika maso. Rafitra fitantanana ny atiny Showpad hitantanana tsara ny atiny ary hampandre haingana ny ekipanao amin'izay misy fanavaozana - hanamora ny fitadiavana ny atiny mety amin'ny olona mety amin'ny fotoana mety. Ny Showpad dia afaka miharo amin'ny CMS na DAM misy anao mba hanafarana na hampifangaroana ny fitehirizam-bokinao manontolo.
Omeo ny onboarding, fiofanana ary fampiofanana ny mpivarotra dia mila tonga mpanolo-tsaina azo itokisana ary mihoatra ny quota amin'ny rindrambaiko fiofanana momba ny varotra Showpad Coach sy rindrambaiko fanofanana. Miaraka amin'ny Showpad Coach dia afaka:
Train - Omeo fiofanana an-tsambo sy fiofanana hanampiana ireo solontenan'ny varotrao hahomby.
hanombana - Araho maso ny fitazonana ny ekipanao mba hahalalana sy hiresahana ireo toerana malemy.
fampiharana - Amboary ny fahatokisan-tena amin'ny alàlan'ny fampiharana an-tsoratra, ny filalaovana ary ny fandinihan'ny namana
Coach - Manararaotra fanadihadiana sy rakipeo manan-karena mba hahafahan'ny mpitantana manazatra tsara kokoa
Vaovao vaovao intuitive Showpad Coach Hub mpitantana Manamora ny fiofanana sy fiofanana momba ny varotra ho an'ny repoblika mpivarotra an-tsena sy ao anatiny, nefa mbola mamela fotoana ho an'ny mpitantana hanao ny asany andavan'andro.
Hatsarao ny fahombiazan'ny varotra sy ny varotra ary alao ny motera fanoroana hevitra amin'ny alàlan'ny fahatakarana ny fifandraisan'ny mpivarotra sy ny vina aman-draharaha amin'ny atiny sy ny fiofananao. Anisan'izany ny:
Fanadihadiana atiny ho an'ny marketing - Ampiasao bebe kokoa amin'ny atiny misy fiatraikany amin'ny fidiram-bola.
Fomba fijery prospect momba ny varotra - Fohy ny varotrao amin'ny alàlan'ny fanarahana ny haavon'ny fahalianan'ny mpividy anao.
Fanadihadiana momba ny varotra ho an'ny mpampiasa - Avereno atao ny fihetsiky ny mpivarotra anao hanombanana ny fahombiazana
fahaizana artifisialy - Amidio ny marani-tsaina kokoa ary manaterà traikefa manokana ho anao miaraka amina habetsahan'ny data sy isan-karazany tsy manam-paharoa.
Hatsarao ny fahombiazan'ny varotra amin'ny alàlan'ny fanamoriana automatique ny atiny miaraka amin'ny fampidirana fitantanana fananana Showpad, na manamboatra fampiharana mahery vaika sy fizotrana famakafakana amin'ny fampiasana API sy SDK an'ny Showpad. Integrations, Ao anatin'izany ny:
Content - ampifanaraho amin'ny Outreach na Salesloft
Customer Relationship Management - ao anatin'izany ny Salesforce, Microsoft Dynamics, na SAP.
Fampidirana mailaka - Outlook ary G Suite.
Marketing Automation - anisan'izany i Marketo.
Presentations - amboary ny Google Slides na Microsoft PowerPoint ao amin'ny Showpad
Fizaràna efijery - fampidirina anaty Zoom sy Google Calendar tsy misy fitoviana.
Social - Mizarà mivantana amin'ny Twitter, LinkedIn, ary WhatsApp, na mandika rohy mankany amin'ny sehatra sosialy hafa amin'ny alàlan'ny fanitarana Showpad ao amin'ny Google Chrome.
Showpad koa dia manana API sy SDK ilaina mba hampidirana tanteraka ny sehatra amin'ny sehatra rehetra.
Mangataha Demo amin'ny Showpad
Tags: aififandraisan'ny mpividygoogle suitegsuitemarketoMicrosoft Dynamicsmicrosoft outlookfanentananaanalytics momba ny varotrafanombanana ny varotracoaching varotraatiny fivarotanaFanamafisana ny varotrafivarotana fahitanafandrefesana ny varotravarotra fampisehoanafanazaran-tena amin'ny varotrafampisehoana varotrafiofanana varotraSapshowpad
Amporisiho ny iTunes Podcast anao amin'ny Smart App Banner